Dib u celi Network Settings iPhone: Sidee-sawirro iyo Dhibaatooyinka
Marka la isticmaalayo iPhone aad la kulmi karaan dhibaatooyin aad isku xirnaanta network sida aan kugu xiri kartaa iPhone in shabakadaha WiFi, ma aad samayn kartaa ama heli calls xataa iPhone muujin kartaa adeegga lahayn. Waxaa laga yaabaa in aad dooneysid in aad qaadato iPhone dukaanka taageero casriga ah. Laakiin aad hagaajin karo dhibaatooyin ay Naftiinna. iPhone 6 fursadaha keddibna si dhibta noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka. By isticmaalaya Settings Warbixannada Network, doorasho ku ool ah si ay u xaliyaan network arrimaha la xiriira, aad hagaajin karo dhammaan dhibaatooyinka ay si fudud resetting goobaha network aad iPhone sida uu cadeeyo doonaa dhammaan goobaha network, goobaha hadda network gacanta, badbaadiyey network Wi-Fi goobaha, sirta Wi-Fi, iyo VPN goobaha dib u soo qaado Settings iPhone Network in warshad default iyo. Maqaalkani waxa uu daboolayaa 2 qaybood oo fudud:
Qaybta 1. Tallaabo-tallaabo Tutorial u Sida loo celi Settings iPhone Network
Qaybta 2. Troubleshotting: iPhone Network aan shaqayn
Qaybta 1. Sida loo celi Settings iPhone Network
Marka aad hesho shabakada aad iPhone shaqeeya tago, markaas wax ugu horeysay ay tahay inaad samayso waa in dib goobaha network on iPhone. By resetting network iPhone, dhibaatada waxaa laga yaabaa in susscessfuly xalliyo. Oo ma waxaad u baahan farsamooyin wax ay sameeyaan resetting ah, laakiin 4 talaabooyin fudud. Ka dhig samir. Waxay qaadan doontaa hal ama laba daqiiqo si hawsha ay u dhammaystiraan. Markaas iPhone reboot doonaa goobaha network default.
Tallaabada 1. Tubada app Settings ku saabsan iPhone.
Tallaabada 2. Tubada Guud.
Tallaabada 3. Scroll hoos si aad u hesho celi oo ka jaftaa.
Tallaabada 4. In uu furmo suuqa cusub, dooro celi Settings Networking iyo xaqiijin tallaabada.
Mararka qaarkood, inkastoo aadan wax ka beddeli goobaha aad iPhone, network ma ay shaqeyn doonto. Haddii ay dhacdo, ma si toos ah qaadato iPhone dukaan dayactir deegaanka, maxaa yeelay, waxaad ku saxno laga yaabaa in aad naftaada by. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah Talooyin iyo tabaha sida si ay u shaqeeyaan marka network iPhone shaqada ka tago.
* Wi-Fi oo aan shaqayn,
Tiro wanaagsan ee isticmaala iPhone dhibaatooyin la isku xirnaanta Wi-Fi wajihi ka dib markii lagu casriyeeyo si ay u macruufka dambeeyay 9.0 ka version wayn macruufka. Kuwa lagu rakibay macruufka cusub aad sidoo kale dhibaato la mid ah. Haddii ay dhacdo, raac tallaabooyinka kor lagu soo sheegay in ay dib goobaha network aad iPhone ka dibna isku day in aad mar kale in ay ku xidhmaan la Wi-Fi.
* Ma ku xidhi karaa iPhone inay shabakad gaar ah Wi-Fi,
Haddii aad soo food saartay dhibaato xidhiidhinaya ah shabakad u gaar ah Wi-Fi ka dibna marka hore dooro network in ka mid ah liiska guji illoobin. Markaas ka raadi shabakada. Ku qor password shabakad haddii loo baahdo. Haddii dhibaato ka dibna ka jira, samayn ah Settings Warbixannada Network. Ka dib markii rebooting iPhone, xiriiriyo network Wi-Fi.
* Raadinta network ama adeeg no:
Mararka qaarkood iPhone qaadataa waqti dheer si ay baaritaan ugu shabakad ama marmar soo bandhigaan adeeg lahayn. Si loo xaliyo dhibaatada ugu horeysay shid hab diyaarad ka dibna dami dhowr ilbiriqsi ka dib. Haddii aysan xal u helidda dhibaatada ka dibna u qabtaan "Dib u celi Settings Network." Resetting goobaha shabakada hubaal hagaajin doonaa "Service Maya" arrinta.
* Ma samayn karaan ama heli calls:
Mararka qaarkood dadka isticmaala iPhone ma samayn karaan ama heli calls ay la iPhone. Waxay dhacdaa marka hab diyaarad ay si qalad ah u soo jeestay oo ku saabsan. Waxaa Turning ee hagaajin doonaa dhibaatada. Laakiin haddii hab diyaarad ma keeno dhibaatada reboot ah ayaa dhibaatada xallin karta. Haddii dhibaato ka dibna ka jira u qabtaan "Dib u celi Settings Network" iyo xallin doonto dhibaatada.
* IMassage aan la shaqeeyo:
Qaar waxay yidhaahdaan in iMassage aan shaqaynayn iyo xitaa aysan iyagu ha u dami. Sidaas daraaddeed waxay dib goobaha shabakada si uu u xaliyo dhibaatada iyo xayiran iPhone jidkii ay nus ka mid ah booting saacado. In la xalliyo dhibaatooyin la codsiyada sida iMassage sameeyo dib adag doorataa celi All dhacna menu dib halkii ay qabanayaan celi Settings Network.
* Settings ama arrimo aan ka jawaabaya:
Mararka qaarkood menu goob aan ka jawaabidda iyo sidoo kale macruufka dhamaystiran. Keddibna A adag hagaajin karaa dhibaatada. Waxaad sidaas samayn kartaa adigoo u socda Settings> General> celi> celi Settings All> celi Settings oo dhan.
* IPhone lama synced:
Mararka qaarkood dadka isticmaala iPhone dhibaatooyinka ay la kulmaan computer. Waxa ay muujinaysaa in digniinta ah in iPhone ma hagaagsan kartaa sabab u tahay la xidhiidha iPhone la damiyo. "A celi Settings Network ee iPhone iyo reboot computer ah u xaliyaan dhibaatada.
> Resource > iPhone > Sida loo celi Settings Network On iPhone iyo Talooyin & Tricks